Google Search Console Nampatahotra ny Crap avy Amiko! | Martech Zone
Google Search Console Nampatahotra ny Crap avy Amiko!
Alahady Oktobra 26, 2014 Alakamisy 25 martsa 2021 Douglas Karr
Niasa andro aman'alina niomana tamin'ny Martech izahay ho an'ny fanovana endrika ho avy. Tafiditra ao amin'ny asa ny miverina amin'ny alàlan'ny famoahana bilaogy 4,000 - miantoka ny fisianay sary, tsy lany andro ny atiny (toy ny sehatra tsy niasa), ary miantoka fa tsy manana olana hafahafa hafa izahay ... toy ny lahatsoratra 100 fa nanoratako ny encoding html ho an'ny sombin-kaody, ary maro hafa. Nanao audit audit ihany koa izahay ary tsy nanaiky tranokala spam an-taonina izay nanondro anay.
Ny fanatsarana iray fanampiny dia ny fametrahana an SSL certificate ho fiomanana amin'ny safidy fitarihana taranaka sy ecommerce dia hanampy an'ity tranonkala ity izahay. Tsy lazaina intsony fa nilaza i Google fa ny fananana tranokala azo antoka dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny laharana amin'ny ho avy. Ny fiovana rehetra nataoko dia nisy fiatraikany tokoa. Raha ny marina, tamin'ny volana lasa dia nitombo avo roa heny ny fivezivezena ny motera fikarohana anay. Ity misy pikantsary avy amin'ny Semrush:
Raha ny marina dia tsy manana fotoana betsaka hiasana amin'ny Martech toy izao izahay satria miasa mba hahazoana antoka fa hohatsaraina daholo ny tranonkalan'ny mpanjifanay. Anisan'ny fizotranay, nampiasa fitaovana marobe aho hanodinkodina ny tranonkala mitady olana, ary nanitsy olana hafahafa sasany izay Google Search Console nanambara… toy ny lohateny duplicate, sns.
Ka… alaivo sary an-tsaina ny fihetsiko rehefa niditra an-tsehatra aho Google Search Console tamin'ity herinandro ity ary nahita an'ity:
Nijery ny lesoka tamin'ny Webmasters aho ary tena diso ny lesoka. Nojereko ary nojereko indray ny ahy Lisitra fizahana CMS SEO - fisie robots.txt, ny sitemapako, ny fanodinako… ny zava-drehetra! Nijery raha misy hafatra (oh: sazy) ary tsy nisy hafatra nalefa tamiko. Na dia mikorontan-tsaina aza aho dia tsy haiko ny manontany tena raha nisy zavatra tsy nety tamin'ny Webmasters.
Ary tonga tamiko ilay izy… ahoana raha Google Search Console dia nitaky ny lalana azo antoka amin'ny tranokala? Ka nisoratra anarana aho Sokajys: //martech.zone raha tokony ho http://martech.zone. Raha ny marina dia tsy mila nanova ny mari-doha akory aho. Ity no nipoitra:
Google… natahoranao tanteraka ny zava-banga tamiko. Nihevitra aho fa nanao zavatra ratsy be tamin'ny tranokalako ka nanakana ny fikarohana rehetra aho. Whew!
Tags: google webmasterfitaovana webmaster googlehttp seohttps seohttps webmasterseo tsy sslseo sslssl mifanohitra amin'ny tsy ssl seossl webmasterfitaovana webmasterWebmasterwebmaster httpswebmaster ssl
Chitter: Avadiho ny mpanjifa ho Ambasadaoron'ny marika mizara sosialy!